လိုင်စင်မရှိဘဲ ထိုင်းသို့ အလုပ်သမား လိမ်လည် ပို့ဆောင်သည့် အေဂျင်စီကို အရေးယူပေးရန် တိုင်ြ?? - Yangon Media Group
လိုင်စင်မရှိဘဲ ထိုင်းသို့ အလုပ်သမား လိမ်လည် ပို့ဆောင်သည့် အေဂျင်စီကို အရေးယူပေးရန် တိုင်ြ??
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈
ဝန် ဆောင်ခယူကာ လိုင်စင်မရှိဘဲ ထိုင်းသို့ အလုပ်သမားလိမ်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့သည့်အေဂျင်စီကို ပြည်ပအလုပ် အကိုင်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ အလုပ်သမား ၂ဝ သည် တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၁၁ သိန်း ကျော်စီဖြင့် စုစုပေါင်း ငွေကျပ် သိန်း ၂ဝဝကျော်ကို ဝန်ဆောင်ခ အဖြစ်ပေးချေပြီး ချင်းမိုင်အမည် ရှိကုမ္ပဏီနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွား ရောက်ခဲ့ကြောင်း ထိုင်းသို့ ရောက် ပြီးနောက် အလုပ်အကိုင်မရရှိဘဲ ထိုင်းရဲများ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လိမ်လည်ပို့ ဆောင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ် ဆက်ပေးသည့်ပွဲစားများကို အရေး ယူပေးရေး ဝေဘာဂီရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တိုင် ကြားစာနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေး နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (CTUM) တို့မှ ဇန်နဝါ၇ီ ၂၈ ရက် က သိရသည်။
”ဒီအလုပ်သမားတွေကို မြန်မာဘက်ကနေ ထိုင်းကိုတရားမဝင်ပို့လို့ ထိုင်းဘက်မှာ အဖမ်းခံရပြီး ပြန်လာရတာ။ ပို့တဲ့အေဂျင်စီက လိုင်စင်ကလျှောက်ထားဆဲပဲ ရှိ သေးတယ်။ တရားမဝင် အလုပ်သမားပို့တဲ့အတွက် အလိမ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမား ၂ဝ မှ ကိုးဦးက ဦးဆောင်ပြီး တရားလိုလုပ်ပြီး တော့ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၆ နဲ့ အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု CTUM မှ ကိုဟိန်းလတ်က ပြောသည်။
¤င်းအလုပ်သမား ၂ဝ သည် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာက ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ပွဲစားများမှတစ်ဆင့် ယင်းကုမ္ပဏီနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီမှ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဆိုဖာစက်ရုံ၊ အုန်းနို့စက်ရုံနှင့် ကော်စက် ရုံတို့တွင် အလုပ်ရမည်ဟုဆိုကာ အကျိုးဆောင်ခငွေများ ရယူပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် ထိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊ ထိုင်းသို့ရောက်သောအခါ အလုပ်သွင်းပေးခြင်းမရှိဘဲမဟာချိုင်ရှိ အဆောင်တစ်ခုတွင်ထားရှိခဲ့ပြီး ပတ်စ်ပို့များကိုသိမ်းဆည်းထားကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် ချင်းမိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် ပွဲစားတို့ကို ဆက်သွယ်ရာ အလုပ်သွင်းပေးရန် လာရောက်ခေါ် ဆောင်မည်ဟုဆိုသော်လည်း ၎င်းတို့မလာမီ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်၌ ထိုင်းရဲများ အဆောင်သို့ဝင်ဖမ်းခဲ့ ကြောင်း မဟာချိုင်ရဲစခန်းတွင် ရှစ်ရက်ကြာအချုပ်ခံရပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်း ကြောင့် ဇန်နဝါရီ ၂၅ရက်တွင် ရန်ကုန်သို့ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့ ကြောင်း ချင်းမိုင်ကုမ္ပဏီသည် တရားဝင်အလုပ်သမား စေလွှတ် ခွင့်လိုင်စင် မရှိသေးသည်ကို ရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှ သိရှိခဲ့ရသဖြင့် လိုင်စင်မရှိဘဲ ပို့ဆောင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ပွဲစားများအား အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားရခြင်းဖြစ်သ လို မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ကိုပါ တိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၌ ကြက်စာကျောက်တူးရာမှ တောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွား၊ သုံးဦး မြေပိသေဆုံး၊ တစ်ဥ
၁၆ ပဲရည် ရွှေဈေး တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ဆယ်သိန်းခြောက်သောင်းခန့် အထိ စံချိန်တင်မြင့်တက်
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် OBOR ဖိုရမ်သို့ တက်ရောက်ရန် တရုတ်နိုင်င??
မြို့ပတ်ဘူတာရုံများ အဆင့်မြှင့်ရာ၌ အိမ်ရာစီမံကိန်းများနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထာ??